Tokony hamaha ny tsy fitoviana ny fizahantany hoy ny minisitry ny fizahantany Bartlett
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tokony hamaha ny tsy fitoviana ny fizahantany hoy ny minisitry ny fizahantany Bartlett
Minisitry ny fizahantany any Jamaika, ny Hon. Nilaza i Edmund Bartlett fa raha maharitra ny fizahan-tany dia tsy maintsy misy fitoviana lehibe kokoa eo amin'ireo mpiray antoka ary fizarana ara-drariny kokoa ny vola azo amin'ny fizahantany.
Niresaka tamin'ny fivorian'ny filankevitra iraisana faha-110 an'ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana misahana ny fizahan-tany (UNWTO) ny alatsinainy 17 jona teo tao amin'ny Heydar Aliyev Center ao Baku, Azerbaijan izy. Ny fivorian'ny filankevitra mpanatanteraka maharitra telo andro dia manomboka amin'ny 16 - 18 jona 2019.
Miaraka amin'ny vola azo avy amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena mitentina 1.7 tapitrisa tapitrisa dolara amin'ny taona 2018 ary iray amin'ireo asa 11 eran-tany vokarin'ny fizahan-tany, hoy ny minisitra Bartlett, -ny faritra miankina amin'ny tany. ”
Nanamarika ny tena ahiahy izy satria maro amin'ireo firenena manana fiankinan-doha ambony indrindra amin'ny fizahan-tany, toy ny Karaiba manana fiankinan-doha amin'ny harin-karena faobe 40% na mihoatra ary ny Nosy Virgin US miaraka amin'ny fiankinan-doha amin'ny 98.5% amin'ny fizahan-tany, dia miavaka amin'ny tsy fananan'asa be koa, trosa be amin'ny tahan'ny harin-karena faobe, ny olana ara-tsosialy ary ny tsy fitovian'ny fidiram-bola avo lenta.
Nasongadiny ihany koa ny antontan'isa izay manondro fa ny 80% amin'ny fizahan-tany manerantany dia fananan'ireo orinasa mpizahatany kely sy salantsalany (SMTE) saingy latsaky ny 20% ny valiny no mankany aminy.
“Manelingelina izaitsizy izany ary miteraka tsy fitoviana sy tsy fifandanjana, ary tsy dia tsara loatra izany sary izany,” hoy ny minisitra Bartlett.
Nilaza izy fa ny fifanakalozan-kevitra momba ny fizahan-tany amin'ny fivorian'ny UNWTO Executive Council, dia nanome «fotoana iray hirosoantsika hiroso bebe kokoa amin'ny fahatakarana hoe ahoana no tsy maintsy hisy fiantraikany eo amin'izao tontolo izao ity orinasa lehibe ity amin'ny fomba tsara kokoa amin'ny famoronana singa bebe kokoa amin'ny fitoviana, fampidirana ary indrindra hananganana ny fahafahan'ny faritra miankina amin'ny fizahan-tany mba tsy ho sitrana sy hivoatra fotsiny fa hivoatra ”.
Ny minisitra Bartlett dia nanararaotra niarahaba ny fanambarana nataon'ny Etazonia amerikana fa mieritreritra ny hiverina any amin'ny UNWTO izy. Ny an'ity dia nanambara an-dRamatoa Emma Doyle, mpanampy ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump ary ny lefitra lefitry ny mpiasa ao amin'ny White House. "Ny fiverenan'i Etazonia dia afaka manampy amin'ny fanamafisana orina an'i Amerika amin'ny maha fizahan-tany fizahan-tany azy," hoy izy nanamarika.